Kungani i-infographics ithandwa kangaka? Ukusikisela: Okuqukethwe, Usesho, Okomphakathi, nokuguqulwa! | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 6, 2021 ULwesine, April 7, 2022 Douglas Karr
Abaningi benu bavakashela ibhulogi yethu ngenxa yomzamo ongaguquguquki engiwenzayo ekwabelaneni ukumaketha infographics. Kalula nje… Ngiyabathanda futhi badume ngendlela emangalisayo. Kunezizathu eziningana zokuthi kungani i-infographics isebenza kahle ngamasu wokuthengisa wedijithali wamabhizinisi:
Visual - Ingxenye yobuchopho bethu inikelwe embonweni kanti i-90% yolwazi esilugcinayo iyabonakala. Imifanekiso, amagrafu, nezithombe konke kuyizindlela ezibucayi zokuxhumana nomthengi wakho. I-65% yabantu bangabafundi ababukwayo.
Memory - Ucwaningo selutholile ukuthi, ngemuva kwezinsuku ezintathu, umsebenzisi ugcine kuphela u-10-20% wolwazi olubhaliwe noma olukhulunyiwe kepha cishe u-65% wolwazi olubukwayo.
transmission - Ubuchopho bungabona izithombe ezihlala ama-millisecond ayi-13 kuphela futhi amehlo ethu angabhalisa imiyalezo ebonakalayo engama-36,000 ngehora. Singawuthola umqondo we indawo ebonakalayo ngaphansi kuka-1/10 wesekhondi nokubukwayo kukhona icutshungulwe ngama-60,000X ngokushesha ebuchosheni kunombhalo.
Ukucinga - Ngoba i-infographic imvamisa yakhiwa isithombe esisodwa okulula ukusishicilela nokwabelana ngaso kuyo yonke iwebhu, zikhiqiza ama-backlinks akhulisa ukuthandwa futhi, ekugcineni, nokuhlelwa kwekhasi owashicilela ngalo.
incazelo - I-infographic eyenzelwe kahle ingathatha umqondo onzima kakhulu futhi iwuchaze ngokubonakalayo kumfundi. Umehluko phakathi kokuthola uhlu lwezikhombisi-ndlela nokubuka imephu yomzila.
Iziqondiso - Abantu abalandela izinkomba ngemifanekiso babenza kangcono ngama-323% kunabantu abalandela ngaphandle kwemifanekiso. Singabafundi ababukwayo!
zokuphawula - I-infographic eyenzelwe kahle ifaka uphawu lwebhizinisi olithuthukisile, nokwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo kwenhlangano yakho kuwebhu yonkana kumasayithi afanele okwabelwana ngawo.
ukuzibophezela - I-infographic enhle ibandakanya kakhulu kune-block yombhalo. Abantu bavame ukuskena umbhalo kepha bagxile kakhulu kokubonwayo ngaphakathi kwe-athikili, banikeze ithuba elihle lokubakhanyisela nge-infographic enhle.
Isikhathi sokuhlala - Izivakashi ezishiya isiza sakho zivame ukuhamba kungakapheli imizuzwana engu-2-4. Njengoba kunesikhathi esifushane sokuncenga izivakashi ukuba zizungeze, ukubukwa kanye ne-infographics kuyindlela engcono yokubamba izinhlamvu zamehlo abo.
Ukwabelana - Izithombe kwabelwana ngazo ezinkundleni zokuxhumana kakhulu kunezibuyekezo zombhalo. Ama-infographics ayathandwa futhi abiwa ngawo ezinkundleni zokuxhumana Izikhathi ezingama-3 ngaphezulu kunanoma yiluphi olunye uhlobo lokuqukethwe.
Ukuphindaphinda - Abathengisi abathuthukisa i-infographic enhle bangaphinde babeke imidwebo yama-slides kuzethulo zabo zokuthengisa, izifundo zamacala, amaphepha amhlophe, noma bawasebenzisele isisekelo sevidiyo echazayo.
Ukuguqulwa - Yonke i-infographic enhle ihambela umuntu ngomqondo futhi iyabasiza ukuba bayiyele ekubizelweni esenzweni. Abakhangisi be-B2B bayithanda ngokuphelele i-infographics ngoba banganikeza inkinga, isixazululo, umehluko wabo, izibalo, ubufakazi, nokubizelwa esenzweni konke ngomfanekiso owodwa!
Kanye nokwenza ama-infographics wami wesiza sami namakhasimende ami, ngihlala ngigqolozela iwebhu ngifuna ama-infographics angakufaka kokuqukethwe kwami. Ungamangala ukuthi okuqukethwe kwakho kuzosebenza kahle kanjani nge-infographic yomunye umuntu ku-athikili yakho… futhi lokho kufaka lapho uxhumanisa nabo (okufanele uhlale njalo).
I-infographic yami yakamuva ethunyelwe iklayenti bekuyi-infographic on lapho izingane zithola amazinyo azo kudokotela wamazinyo okhonza izingane e-Indianapolis. I-infographic ishaye kakhulu futhi yikhasi eliphezulu lokufika njengamanje kusayithi labo, elinengxenye engaphezu kwengxenye yabo bonke abavakashela kusayithi labo elisanda kwethulwa.
Contact Highbridge ukuthola i-Infographic Quote
Tags: ukuguqulwatinkhombandlelaisikhathi sokuhlalalwekucocisanaincazeloisithombeingcaca yolwaziizibalo ze-infographicukudluliswa kolwaziihluzo zokwazisaI-Marketing Infographicsinkumbuloukuphindiselaukusebenzisa ngokugcwele injiniseoUkwabelanaOkubukwayoukufunda okubukwayo
Sep 10, 2013 ku-8: 23 AM
Uthole wonke umsebenzi ongena kubo, kepha ukuhlola amaphutha kungasiza.
"Bheka inzalo yosesho" ?????
Sep 10, 2013 ku-10: 52 AM
Ngo-Apr 23, i-2014 ku-5: i-30 PM
Sawubona Douglas. Ngiyasithanda isihloko senu! Izibalo eziningi ezithokozisayo ngaleli thuluzi eliya landa kakhulu lokubonwa kwedatha. Angikwazanga ukucabanga ngendlela engcono yokukhombisa ukusebenza kahle kwe-infographics kunokusebenzisa eyodwa. Bengithembele kokuqukethwe kwakho ukubhala okuthunyelwe kwami ​​ku-Medium, lapho ngikusho khona. Ngicabange ukuthi ungathanda ukuyihlola: https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78. UKarinne
Ngo-Apr 23, i-2014 ku-7: i-09 PM
Sep 26, 2015 ku-2: 35 AM
Iqoqo elihle le-infographics! Ngithanda nje ukuthola yonke indaba ngisebenzisa lutho ngaphandle kwezithombe. Kuyathakazelisa lokho. Ziyakhula ukusetshenziswa okuqinisekile!
Okthoba 18, 2015 ngo-11: 38 AM
Bengiludinga cishe lonke lolu lwazi ngesabelo sami esikoleni. Imininingwane epholile kakhulu,
Futhi ngendlela uma uzibuza ukuthi ngineminyaka emingaki, ngineminyaka eyishumi nanye kuphela futhi sengivele ngiluthanda kakhulu lolu lwazi. Umsebenzi omuhle, Mnu Douglas !!!!!!!!!!!!!
I-Oct 18, i-2015 ku-5: i-50 PM
Lokho kuhle kakhulu i-Amalshah! Ngiyabonga ngenothi… unekhono lomsebenzi ogqamile eliphambi kwakho.